Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Fitsipika fanoratana faingo [,]
Ireto ambany ireto ny fitsipika arahina rehefa mampiasa faingo [ , ].
Ny faingo no mari-piatoana manahirana indrindra ny mampiasa azy. Ny fanalana na fametrahana faingo eo amin'ny fehezanteny iray dia mety hampiova ny hevitr'ilay fehezanteny. Indraindray aza dia mety ho lasa mifanohitra amin'ny tiana hambara mihitsy ny heviny raha diso petraka ny faingo. Noho ireo antony ireo dia tokony hitandrina sy hisaina lalina ny mpanoratra iray alohan'ny hametrahana faingo.
1 - Rehefa miresaka mivantana amin'ny olona iray dia mpiasaina ny faingo hanasarahana ny anaran'ilay olona na ny anaram-boninahitra entiny.
- Naivo, hosahirana izahay hamita ity asa ity raha toa ka ilaozanao.
- Misaotra, Andriamatoa Filoha, tamin'ny fanohananao anay.
- Mahafinaritra ahy ny mijery ny endrikao, ry Lisy.
2 - Rehefa manoratra daty ka apetraka ny anaran'ny andro na anaran'ny toerana dia asiana faingo ao aorian'ilay andro na toerana.
- Alatsinainy, 22 Novambra 2016.
- Antsirabe, 22 Novambra 2016.
3 - Rehefa milaza anaran-tanàna miaraka amin'ny faritra na firenena misy azy dia elanelanina faingo.
- Ilay orinasa dia manana birao any Taolanaro, Madagasikara.
- Taolanaro, Anosy.
- Taolanaro, Anosy, Madagasikara.
Ny anaran'ilay tanàna no soratana mialoha dia asiana faingo izay vao ny faritra na firenena misy azy. Diniho ny fipetraky ny faingo amin'ireo ohatra eo ambony ireo.
4 - Rehefa manao fitanisana dia mampiasa faingo.
- Eo amin'ireo tsindri-tsakafo dia afaka misafidy ianao amin'ny akondro, manga, letisy, na papay.
- Izaho no hitondra ny sakafo, i Soa no hitondra ny mozika, ary i Jaona kosa no hiantoka ny fiara handehanana.
- Tao anatin'ny fifanajana, fifandeferana, ary fifankatiavana no nanatanterahana ny adihevitra omaly.
- Nisafidy ny taranja matematika, Frantsay, ekônômia, sy statistika aho tamin'ny telo volana voalohany.
- Niditra tao amin'ilay fivarotana aho dia nividy paoma, voatabia, ronono sy sôkôla.
Misy mpanoratra sasany manala ny faingo eo anoloan'ilay teny na andian-teny farany tanisaina. Mety hampiova tanteraka ny hevitry ny fehezanteny anefa ny fanaovana izany. Amin'ilay ohatra alohan'ny farany eo ambony io izao, raha esorina ny faingo eo alohan'ny sy dia miova tanteraka ny hevitr'ilay fehezanteny satria lasa taranja iray mitambatra ny ekônômia sy statistika. Eo amin'ilay ohatra farany kosa dia tsisy faingo eo alohan'ny sy satria mitambatra ao anaty boaty iray ny ronono sy sôkôla.
5 - Rehefa misy mpamari-toetra maromaro miaraka amin'ny teny iray dia elanelanina faingo ireo mpamari-toetra. Ny faingo eto dia manolo ny teny hoe sady na ary na sy.
- Lehilahy tso-piaina, hendry, matotra ilay hampakatra ahy ho vady.
- Lehilahy tso-piaina, hendry, sady matotra ilay hampakatra ahy ho vady.
6 - Raha misy teny na andian-teny atsofoka eo amin'ny fehezanteny iray ho fanampim-panazavana, dia asiana faingo manodidina ilay teny na andian-teny. Azo esorina ao anatin'ny fehezanteny ireo andian-teny ireo satria na miala aza izy dia voatazona hatrany ny hevitr'ilay fehezanteny. Diniho ny mahasamihafa ireto ohatra eto ambany ireto.
- Nomeko an'i Toky, ilay zandrinao iny, ny boky. (Iray ihany no Toky fantatra dia ny zandrin'ilay olona voaresaka, noho izany na esorina aza ny ilay zandrinao iny dia voatazona ny hevitr'ilay fehezanteny.)
- Nomeko an'i Toky ilay zandrinao iny ny boky. (Misy Toky maromaro fantatra anisan'izany ny zandrin'ilay olona voaresaka, noho izany ny fanesorana ny ilay zandrinao iny dia mampiova ny hevitr'ilay fehezanteny satria lasa manjavozavo hoe i Toky iza marina no tiana resahina eto, ary tsisy faingo manodidina azy.)
7 - Ny andian-teny fampidirana eo amin'ny fehezanteny iray dia arahina faingo.
- Raha ny fahafantarako azy, efa nifona taminy ny zandriny.
- Ankoatra izay, napetraka eo anivon'ny minisiteran'ny fahasalamana ny vaomiera ahazoana ny vaovao ara-pahasalamana momba ny tra-boina rehetra.
8 - Raha misy teny na andian-teny tiana hampidirina any amin'ny faran'ny fehezanteny iray dia ialohavan'ny faingo. Ireny teny ireny matetika dia karazana eritreritra tonga tampoka ao an-tsain'ilay mpanoratra eo am-panoratana ilay fehezanteny. Azo esorina tao anatin'ilay fehezanteny koa izy ireny.
- Hitako tany an-tsena ianao omaly, sa?
- Mba sisao sakafo kely aho, azafady.
- Mifangarika be ny loko eto amin'ity sary ity, aleo tsorina ny marina.
9 - Raha entina hanakambanana fehezanteny roa ny teny hoe nefa, kanjo, saingy, sady, kanefa, sns. dia asiana faingo eo alohany.
- Nividy fiara izy, nefa halany ny nandoa vola tsikelikely. (Fehezanteny roa mahaleo tena natambatra ho fehezanteny iray: Nividy fiara izy + Halany ny nandoa vola tsikelikely.)
- Tsotra ilay fitafy nefa kanto. (Fehezanteny iray ihany noho izany tsisy faingo eo alohan'ny nefa.)
10 - Rehefa mitatitra teny, soratra, na eritreritr'olona ao anaty farango sosona dia ampiasaina ny faingo eo alohan'ny hoy izy, ary ampidirina ao anaty farango sosona ilay faingo.
- Ho avy aho, hoy izy. Tandremo sao ilaozanareo a!
- Tena tiako ianao, hoy i Soa niangoty sady nijery no namihina ahy mafy. Sambatra aho manana anao.